Mmepe ụlọ ọrụ
kọfị na akpa tii
akpa nri anụ ụlọ
nkịta nri akpa
Akpa anụ ụlọ ndị ọzọ
Akpa ntụ ọka
Akpa ọka ọzọ
agụụ retort & oyi kpọnwụrụ akpa
Akpa nri ndị ọzọ
Ou akpa akpa
Afọ na-ebili akpa
nwa na-eguzogide akpa
njikere ụgbọ mmiri akpa
ewepụghị akwụkwọ akpa
ebili akpa akwụkwọ
akụkụ gusset akwụkwọ akpa
ewepụghị ala akwụkwọ akpa
Mpịakọta ihe nkiri
ihe nkiri plastik
akwụkwọ mpịakọta akwụkwọ mpịakọta
n'èzí spout akpa
akpa nri ụmụaka
Akpa ere ere
Ihe omuma ulo oru
Ahaziri ihendori akpa wholes ...
Ahaziri cat ahịhịa akpa ca ...
Etu esi eji ihe nkiri m mpịakọta pac ...
Njikere ụgbọ mmiri nha niile nwere ike ...
Ahaziri eguzo ọtọ reseala ...
Omenala nwa eguzogide mmịfe mkpọchi uwe akpa
Slider zipa zipa nwa eguzogide akpa anya mara mma nke ukwuu, na nka. Naanị iji nweta akpa mpempe akwụkwọ a, anyị kwesịrị ịtụ zipa pụrụ iche, yana itinyekwa ihe mmịfe ahụ n'ime akpa. Nke ahụ ga-efu oge na ego. Ma ọ bara uru na nke ahụ.
Njikere ibupu nha cannabis niile
Anyị tumadi na-eme OEM ọrụ, nke pụtara na anyị ga-emepụta na akpa dị ka gị chọrọ akpa ụdị, size, ihe onwunwe, ọkpụrụkpụ, obibi akwụkwọ na nke ukwu. Ọ bụ ezie na ugbu a, enwere mkpa ka ukwuu na ụgbọ mmiri ụgbọ mmiri, mgbe ahụ anyị na-ezute ahịa ahụ, anyị na-anwa ike kachasị mma iji mee gị mma na mma kacha mma.
Omenala e biri ebi nwa-eguzogide tuo N slid akpa
Anyị emeela ọtụtụ ụdị nchara akpa, ụfọdụ bụ obere akpa, ndị mmadụ ga-etinye ngwaahịa ha ozugbo. Ezie na ụfọdụ ndị ahịa na-achọ ịme nnukwu akpa tuo, dị ka 9 `` X12 '', dị ka akpa ịzụ ahịa. Ha ga-etinye akpa ahụ n’ụlọ ahịa, ozigbo enwere onye na-azụ ahịa ga-ewere obere obere akpa dị iche iche, ha ga-etinye obere akpa niile n’ime nnukwu ahịa ịzụkọtasị a, ma kaa ya akara dịka gọọmentị chọrọ.
Ugboro abụọ zipa nwa-eguzogide akpa akpa
Ugboro abụọ zipa bụ ụdị mkpọchi mkpọ pụrụ iche nke nwere ike ichebe ụmụaka site na ngwaahịa ahụ n'ime akpa ahụ, enwere oghere adịgboroja na azụ nke akpa ahụ, ọ bụrụ na ịchọrọ imeghe akpa ahụ, ọ ga-ewepụ ihu oyi na azụ oyi akwa n'otu oge Ọ bụ ihe a ma ama na akpa mmanya.
Ahaziri ebili resealable afọ akpa
Akpa mkpọchi mkpọchi bụ ụdị akpa eji eme ihe maka ngwakọ mmanya, n'agbanyeghị okooko osisi akpọrọ ma ọ bụ kọfị, shuga, kuki na-agbakwunye na CBD ma ọ bụ THC. Imirikiti ndị ahịa hụrụ ihu ọma na-egbu maramara na windo, hụkwa ebe obibi UV bụ usoro ọhụrụ.
China N'ogbe akpa sachet akpa
Maka mmanya, dị ka nke okooko osisi a mịrị amị, ndị mmadụ na-ahọrọkarị akpa n'ihi na ọ chọrọ ohere ka ukwuu. Mgbe ụfọdụ capsules, obere akpa sachet ga-abụ nhọrọ ka mma. Anyị nwere ike ịme obere 4 * 5cm akpa, ebe nha bụ 5 * 12cm, dị ka akpa Carttel dị n'okpuru. Ọzọkwa maka obere akpa mmanya, ị nwere ike ime Mat, kenkowaputa ma ọ bụ UV, na foil ma ọ bụ na-enweghị, na windo, zipa, wdg.
Ekwentị ： +86 312-6770499
Adreesị ： 0lọ 310, Liangjiayingzi 2-59, Nanshao Street, Kazuo, Chaoyang, Liaoning, China